Waa tan qoraalka rasmiga ah ee Kah Walla's CPP - TELES RELAY
ACCUEIL » SIYAASADDA Tani waa bayaan rasmi ah oo ka soo baxay Kah Walla's CPP
Tani waa bayaan rasmi ah oo ka soo baxay Kah Walla's CPP
Waxay ahayd dabayaaqadii Isniinta galabnimadii shabakadaha bulshada in dhawaaqii lama filaanka ahaa ee hadalkii Paul Biya uu bilaabay inuu wareego: "Madaxa Dawladdu wuxuu khudbad u jeedin doonaa qaranka saacadaha 20. Maalintii xigtay, Madaxweynaha Cameroon wuxuu qabtay khudbadiisa ugu dambeyntiina wuxuu ku dhawaaqay shirkii dhamaadka bisha Sebtember “wada hadal qaran” oo si toos ah uga socda isku dhaca dilaaga ah ee u dhexeeya kooxaha gooni u goosadka ah iyo ciidamada amniga ee galbeedka dalka. Khamiisti 12 Sebtember 2019, Xisbiga Dadka Cameroon (CPP) ayaa u codeeyay cinwaankan umadda. Lebledparle.com, wuxuu kuusoo bandhigayaa qoraalka oo dhan.
Kah Walla - DR
* [Bayaanka CPP ka dib khudbadii Madaxweynaha Jamhuuriyadda 10 Sebtember 2019] *
Waxyaabaha soo socdaa waa bayaanka CPP ee khudbadda Madaxweyne Paul Biya ee ku saabsan 10 Sebtember 2019 oo ku saabsan mowduuca ugu weyn ee xiisadda gobollada Waqooyi Galbeed iyo Koonfur Galbeed.
* Nuxurka hadalka *
Nuxurka hadalka Mr. Biya waa mid aan sax ahayn, marin habaabin ah iyo aflagaado cad oo loo gaysanayo dadka reer Cameron.
- Wuxuu diiday inuu garto dhibaatada anglophone ee asal ahaan ka soo jeedda taariikhda siyaasadeed, dhaqan iyo dhaqaale ee waddankeenna. Laga soo bilaabo sannadihii 59 ee xornimada, 37 waxay ku hoos jirtay jihada Mr. Biya. Dowladnimadeeda ayaa haddaba si toos ah mas'uul uga ah dhibaatada qoto dheer, qalafsan iyo qalalaasaha ee uu dalku maanta ku sugan yahay.
- Wuxuu diiday inuu qirto, iskaba daa inuu raaligelin ka bixiyo rabshadaha, xasuuqyada iyo xad-gudubyada xuquuqda aadanaha ee ay ku kaceen dadka ka soo jeeda gobollada Waqooyi-galbeed iyo Koonfur-galbeed ee dowladdiisa (xannibaadda internetka, rabshadaha Badhasaabyada iyo gudoomiyaasha ka soo horjeeda ganacsatada, gaadiidleyda iyo muwaadiniinta caadiga ah) iyo sidoo kale ciidamada qalabka sida ee dowlada Cameroon (dab qabad tuulo, xukun dil ah, jirdil, iwm) seddexdii sano ee lasoo dhaafay.
- Wuxuu diiday inuu qirto khaladaadkiisa, oo aan xusin guud ahaan karti darrada ay dowladiisu muujisay maaraynta dhibaatadan sedexdii sano ee lasoo dhaafay. Hase yeeshe, wuxuu si xun ula hadlay rabitaanka dadka reer Cameron ee ah in tuuladiisu ka dhex muuqato dawladda wuxuuna soo jeediyay in Anglophones ay tahay inay ku qanacdo in loo daayo jagada raiisel wasaare sanadihii oo dhan markii uu si naxariis leh u ogolaaday. mashquul meeshan.
* Soo jeedinta wada hadal qaran *
In kasta oo ay jiraan soo jeedinno dhowr ah oo la soo jeediyey oo arrintan la xiriira, Mr. Biya wuxuu ku guuleystey inuu tan u fasiro wadahadal aan sinaba uga hadli doonin sababaha asalka u ah dhibaatooyinka waddankeenna ka helo. Waxa uu taa beddelkeeda u sameeyay inay noqoto saddex-geesood seddex geesood leh dhammaan natiijooyinka nasiib darrada ah ee aan ka ogaanno khibradda qaran.
Halkan waxaan ku celin doonaa astaamaha iyo waxa ku jira wadahadalka qaran ee dhabta ah.
* SHURUUDAHA QARANKA QARANKA DALKA EE SANKA *
Wadahadalka qaran ee dhabta ahi waa inuu daboolaa mowduucyo kala duwan oo aasaas u ah waddankeena. Kuwaas waxaa ka mid ah:
1. Xalliyaan dhibaatooyinka gumaysigeenna soo dhaafay. Taas oo macnaheedu yahay:
a. Maaree cawaaqibka halgankayagii madaxbannaanida, oo ay ka mid tahay xasuuqii boqolaal kun ee reer Camerooni ah oo ay gaysteen ciidamada gumeysiga iyaga oo la kaashanaya kuwa markii dambe xukumayay Cameroon.
b. Dib u qeexida wada noolaanshaha dhamaan qeybaha dhulkeena. Wadahadalkani waa inuu xaliyo su'aasha Anglophone, oo ah mid ka mid ah dhinacyada ugu wanaagsan.
c. Dib-u-caddee shuruudaha xiriirka ka dhexeeya Cameroon iyo kuwii hore gumaysiga u haystay mustaqbalka.
2. Qeexitaanka xiriirka ka dhexeeya muwaadinka iyo gobolka. Maamulka meesha ka hor xorriyadda waxaa loo xilsaaray inuu dalka uga faa'ideysto faa iidada gumaysiga iyo inuu ku qasbo dadka reer Cameron ujeeddadan. Maamulayaashan gumaysiga waxaa lagu beddelay aqoonyahanno dulman oo naftooda ku abuuray muuqaalkooda. Soojeedinteenna ayaa markaa ku jirta dib u qeexidda xiriirka ka dhexeeya gobolka iyo muwaaddinka dareenka dowlad ee adeegga dadka, dowlad ilaalinaysa dadka, badbaadin iyo xasilnaan.
3. Sharaxaadda qaabka gobolka. Rabitaanka aasaasiga ah ee dadka reer Cameron waa inay lahaadaan madax-bannaani dheeraad ah (go'aan-gaarista iyo madax-bannaanida kheyraadka) heerka maxalliga ah si loo maareeyo horumarkooda, iyada oo aan su'aal la iska weydiinin waxyaabaha mudnaanta leh ee dib ugu soo noqon kara gobolka. dhexe. Waa lagama maarmaan in la go'aamiyo nooca uu Gobolkeenu qaadan doono si loo buuxiyo shuruudahan is-xukunidda ee heer degmo.
4. Dib-u-habeynta Ciidanka iyo hayadaha kale ee xoojinta sharciga (Booliska iyo Gendarmerie). Waxaan u baahanahay inaan dib u qeexno xiriirka ka dhexeeya booliska iyo muwaadiniinta si loo soo afjaro qaabdhismeedka gumaysiga loona horumariyo hub, muwaadin, jamhuuriya, ku jiheynta dadka iyo danaha dastuuriga ah ee ay leeyihiin Shacbi weynaha siin. Waa inaan ku joogsanno xadgudubka, xadgudubka iyo xad-gudubyada sharci darrada ah ee xuquuqda aadanaha ee inta badan lagu arko xiriirka ka dhexeeya xoogagga kala dambeynta iyo dadka. In ka badan sidii hore, dhamaadka wadahadalka qaran ee runta ah, ciidamada difaaca iyo amarku waxay noqon doonaan xoog ku adeega dadka oo aan ahayn qabiil awood leh!
5 - Sharaxaadda nidaamyada iyo xarumaha muhiimka ah. Intii lagu gudajiray wada hadalka qaran ee dhabta ah, waxaan ka wada hadli doonnaa:
i. In la dejiyo mabaadii'da iyo qodobada isku midka ah ee dastuurka cusub ee Cameroon. Maxaa kadhigi doona heshiis cusub oo dhexmara dadka reer Cameron.
ii. Qeex waxyaabaha ku jira nidaamka doorashada ee dammaanad ka qaadaya doorashooyin dimuqraadi ah, doorasho xor ah oo daahfuran.
iii. In la aasaaso qaabka dib-u-habaynta muhiimka ah ee fulinta, sharci dejinta iyo garsoorka bilaha iyo sanadaha soo socda.
6 - Kahadal arinta dib u soo noqoshada qaxootiga iyo siyaasada qaxootiga iyo arinta cafiska maxaabiista siyaasadeed. Wadahadalka qaran, si uu u noqdo mid run ah, waa inuu awood u lahaadaa inuu la tacaalmo qodobo gaar ah oo burburay isla markaana kala qeybsamay dadka reer Cameroon.
* Dhisida aaminaada loo baahan yahay wada hadalka *
Intii lagu jiray saacadihii ugu dambeeyay ee 72, maamulayaasha gobolada ku hadla Ingiriisiga ayaa qaaday tillaabooyin si ay u sii hanjabaan oo ay u cadaadiyaan dadweynaha ku hadla Ingiriisiga iyagoo garaacaya dukaamada isla markaana garaacaya muwaadiniinta isku dayay inay iibsadaan oo kaydiso cuntada usbuuca dhammaadka. Tan ayaa ah in lagu qasbo dadka in ay baxaan inta lagu guda jiro magaalooyinkii dhintay.
Dadka ku hadla Ingiriisiga ayaa weli la qabtay inta u dhaxaysa rabshadaha millateriga Cameroon iyo rabshadaha kooxaha hubeysan ee dhulka ka socda. Khudbadiisa, Mr. Biya wuxuu sameeyay wax aan ku aqoonsaneyn xaalada dhulka ka jirta iyo inuu ku dhawaaqo talaabooyinka ay qaadayaan maamulkiisa si loo soo celiyo loona helo kalsoonidii. Taa bedelkeed, wuxuu dadka kula hadlay aflagaado, iskutallaabta xad dhaafka ah.
Si uu uga soo baxo, wuxuu ku dhawaaqay wada-hadal uu yeelan doono, mana aha xisbi dhex-dhexaad ah, laakiin waxaa leh Raiisal-wasaaraha oo aan xubin ka ahayn golaha dhexe ee xisbiga talada haya ee CPDM, laakiin sidoo kale madaxa dowladda ee ay tixgeliyaan. dadweynaha ayaa mas'uul ka ah qalalaasaha rabshadaha wata ee ay iyagu iska helaan.
Wada hadal run ah ma dhici karo kalsooni la'aan.
Mar labaad, Mr. Biya wuxuu lumiyay fursad aan caadi aheyn oo uu runti la shaqeeynayo dadka reer Kamrooriya sidii ay waddada ugu dhisi lahaayeen mustaqbal ka duwan waddankeenna.
Tani layaab kuma ahan CPP.
Kani wuxuu xaqiijinayaa waxaan ogaynay sanado badan.
Xalka kaliya ee Cameroon waa kala guur siyaasadeed.
* Xisbiga Dadka Cameroon *
* Kah Walla *
* Madaxweynaha Qaranka *
Maqaalkani wuxuu u muuqday midka hore https://www.lebledparle.com/actu/politique/1109269-discours-de-paul-biya-voici-la-declaration-officielle-du-cpp-de-kah-walla
Kalla Moutari: "Dadka reer Nigeriya waa inay dareemaan in dowladdu ay sugeyso nabadgelyadooda" - JeuneAfrique.com
Présidentielle en Tunisie : Ennahdha reconnaît sa défaite et le « carton jaune » adressé par les électeurs – JeuneAfrique.com